I-Wheel yokuGaya yeDayimani, i-CBN yokuGqibezela Wheel, Amaziko eMatshini oMatshini- i-CNC- Jinyunxiang
iidayimani zokugaya iidayimani zibukhali zebladeshi zabona blade
Idayimane yedayimane kunye ne-CBN yesisiki se-carbide milling cutter
idayimane yokugaya amavili ezixhobo ezibukhali ze-carbide izixhobo
idayimane kunye ne-CBN yokugaya ivili yensimbi yentsimbi ibona iilensi
Umatshini wokuhambisa iidayimani
Umatshini wedayimane wokugaya ongaphandle
SIYINIKELA NGOKUFUMANEKA KOKUFUNDA KAKHULU
I-hybrid bond yokugaya amavili e-CNC HSS yesixhobo ...
Amanqaku: 1. Uvakalelo oluhle kakhulu, kulula ukubuyisela kunye nokubuyisela kwakhona ngexesha lokusebenzisa akuyimfuneko 2. Kuqinisekisa ukuchaneka komgangatho omkhulu wokugqiba. 3. Isiqwenga somsebenzi asiyi kutshiswa. 4. Amavili anokusebenza kwinani leemilo ezingathandekiyo. Iidayin zethu ze-resin bond kunye neevili zeCB ziyafumaneka ziyisicaba, ikomityi yendebe, isitya esitywiniweyo, kunye nobume be-cylindrical. Ezi mveliso zidityanisiweyo zinokusetyenziselwa ukothula izixhobo ezahlukeneyo, ukuthoba iindawo ze-axis, ukusika i-quartz kunye neglasi, isiphelo sokuphela ...
Iiseti zeVili lokuGaya amaziko eMachine e-CNC
IINKCUKACHA ZOCWANGCISO LWEENDLELA eziphezulu zokusebenza kokugaya ngomgca wemveliso. Iinkcazo ezintsha zibonisa ngokucacileyo amandla aphantsi okugaya kunye nexabiso eliphezulu lokukhupha isitokhwe esinxibe kancinci. izixhobo zokugaya ziqinisekisa ukuchaneka okuphezulu kwezixhobo zakho kunye nokugqitywa komgangatho ofanelekileyo. Yonke le nto iphantsi kumgangatho wedayimani elungelelanisiweyo. Ukufakwa kwesicelo sokugungxula kwe-TC kunye nezixhobo zokusika i-HSS Umsebenzi ophakamileyo wokugungxula kwezixhobo zokucoca i-tungsten carbide shaft Umgangatho ophantsi wokugaya 1.Umdibaniso ...
iidayimani zokugaya iivili ...
I-Resin bond yedayimane yokugaya ivili isetyenziswa ngokubanzi ekugayeni i-tungsten carbide ejikeleze isaride blade. Umda wokugaya ugobile, kwaye ubukhali kwaye unobomi obude benkonzo. I-resin bond yedayimane yokuqhwa isondo isetyenziselwa ukuveza isikrini endaweni yokufaka iilokhwe zemveli zasimahla. Inokuphucula ukusebenza kakuhle kwesikrini sokubonisa kunye nomgangatho womphezulu, kwaye inciphise indleko.Inexabiso eliphakamileyo lokususa umxholo kunye nokuba mandundu komphezulu. I-resin yedayimane yokugaya ivili ...
idayimane yokugaya i-TCT carbide yabona ...
Ngokuyintloko isetyenziselwa ukugaya ubuso kumatshini wohlobo lwe-CNC ye-TCT ibone blades, idayimane yokugaya iivili zokuqinisa i-carbide ibona iilensi, idayimitha yokugaya amavili ekhangela izixhobo ezibukhali ze-carbide, ezinje ngeVollmer, Abm, Rekord..Grit iyahluka ngokwesicelo. Akunandaba nokuba wenza i-saw entsha (i-Saw Blade for Plate processing, Saw Blade for Solid Wood, Saw Blade for Aluminium, Saw Blade for Special) okanye ukuphinda uyenze, iimveliso zethu zamkelekile. Zintathu izinto ekufuneka zibekwe phantsi kwamazinyo ...
Idayimani kunye nevili le-cbn yokugaya iCarbide R ...
Ukufaka isicelo se-resin bond yedayimane yokugaya ivili i-Resin yedayimani yamavili isetyenziselwa izixhobo ze-carbide ze-tungsten, iglasi yeemoto, i-PDC, i-PCD, i-PCBN, i-ceramics, isafire, iglasi yokukhanya, kunye nezixhobo zemagneti. I-Resin bond yedayimani yokugaya ivili inezinto ezincinci zokugaya, ubushushu obuphantsi bokugaya, ukuzilola okuhle, ukusebenza kakuhle, kunye nokugqitywa komphezulu. Isetyenziselwa ukusika, ukugqiba kokugaya, ukugqiba ngocoselelo, ukulola, kunye nokwenza ipolish. Isetyenziswe ngokubanzi ekuqhubekiseni izinto ...
Isixhobo esenziwe ngamaplanga, iDayimani kunye neCBN yokuGaya ...
Amavili okusika iinkuni Umdibaniso wematrix unokuqinisekisa ukuba ulwazeleleko kunye nokufakwa kothuke Eyona iphambili isetyenziselwa ukugaya abagawuli bokwenza iinkuni. Isondo lokugaya lamaTshayina lithandwa phakathi kwabathengi bobabini ekhaya nangaphesheya ngenxa yomgangatho wayo ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana.Igama liyahluka ngokwe sicelo. I-Diamond Grinding Wheel Cupol yokusika Isixhobo sokususa seCarbide Metal High yokugaya ukusebenza kakuhle, ukusetyenziswa kweevili zokugaya kuhamba kancinci; Ukuzilola okuhle, ukugaya ubushushu obuncinci, kulula ukusixhuma, ...
Ivili lokugaya idayimani yecarbide / Jikeleze uMda D ...
Iidayimani zezona zinto zilukhuni emhlabeni. Ubulukhuni bayo, ukunxiba kunye nokuxhathisa okwenziwa ngumlilo kwenza ukuba idayimani ibe yeyona nto ifanelekileyo ekuxinaniseni oomatshini bokushicilela: : Resin bond idayimane yokugaya ivili Vitrified / Ceramic idayimane yokugaya ivili Metal ibhanti yedayimane yokugaya ivili. Xa usenza ...
Umatshini wokugaya ozenzekelayo wedayimane yegrindin ...
Olu hlobo lwesondo lokugaya lilungile ekusetyenzisweni komatshini wokulungisa ulwelo oluzenzekelayo, lilungele iifektri zefanitshala okanye abavelisi abasebenza ekucwangcisweni kwangaphandle kweeblayte zealloy. Amavili edayimani anamavili e-Bakelite umzimba wedayimani yedayimani enomzimba weBakelite ngobunono obuhle, obusetyenziswa kwimizi-mveliso yokhuni, ukusika simahla kunye nobomi obude ngevili leDayelithi ngomzimba weBakelite yokugaya i-cylindrical grilling, elasticity, sharpness and usahihi 4 intshi yedayimani eyenziwe ...
I-Shijiazhuang Jinyunxiang Technology Co, Ltd ikhethekileyo kwi-resin-bonded and super hard material wheel and CBN grinding wheel. Ngaphezulu kweminyaka elishumi, siye saba yinkokeli yomenzi wamavili wokugaya. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwimigca yemveliso yamakhulu eenkampani zasekhaya nezaphesheya. Ngokusekwe kulawulo lokunyaniseka, ukugcina ukholo, ukuchaneka, unaphakade, singathanda ukubonelela ngeemveliso ezifanelekileyo, ezingaguquguqukiyo neziqinisekisiweyo.
Amavili edayimani ahlelwa kwi-ceramic, i-resin, i-iron sinching, i-electroplating, brazing, njl.
1. I-Resin bond grinding wheel: Ukuzilola kabukhali, akukho lula ukubhloka, ukuguquguquka, kunye nokugqobhoza okuhle, kodwa isibophelelo somzimba wentambo sinamandla amabi, ukubambeka kakuhle kwedayimani kwisidumbu, ukumelana nobushushu obungalunganga kunye nokuxhathisa ukunxiba, ke ayisiyiyo Ilungele isondo lokugraya elinzima, ayilungelanga umthwalo onzima ...
Ukugaya ngaphandle kweziko yinkqubo yokugaya ye-OD. Isondo lokugaya elingenagumbi lisetyenziselwa ukugaya i-peripheral of workpieces. Uhlobo: 1A1, 6A1, 9A1 Isicelo: Iiseti zeCarbide ezenziwe ngesamente, iPolycrystallin 1.Product Igama: I-Diamond Centerless I-Wheel yokugaya, ivili lokuguqa leDiam, ...
Izicelo ezahlukeneyo zesondo lokugaya
Amavili edayimani / i-CBN ye-CNC Grinder Resin bond, umgangatho wedayimani ephezulu, ubuchwephesha obukhethekileyo, obusetyenziswa kwi-5-axis CNC grinders for grinders of tungsten carbide or HSS alloy iron izixhobo Idayimani / CBN Wheel yeProfayile yokuHola iProfayili yedayimane kunye namavili e-CBN njengokuqina kwe-ste ...
Isondo lokugaya: Ubungakanani: 100 * 20 * 16100 * 30 * 16 Izixhobo: I-CBN ye-log ibone blade emva kokuxhotyiswa kwevili lokugaya eliveliswe yinkampani, inokufikelela ngokuchanekileyo. Ke, emva kokusika, umqulu wephepha awunamiphetho imiphetho, amabala kunye nento emnyama. ubonelela ngezi zinto zilandelayo ...
Saw blade grind
Ngokuthandwa koomatshini ababona uluhlu lwee-blade, umgangatho wecandelo le-saw ibachaphazela ngokuthe ngqo ukusebenza ngokuchanekileyo kunye neendleko zemveliso yokubona. Ngexesha lokusetyenziswa kwecala elibonisiweyo, umgangatho wokugaya uya kuchaphazela umgangatho webala elibonileyo kwakhona. Ukubaluleka kwako kukuzibonakalisa. Ngexesha ...
Hayi. 115, Tabei Road, Yuhua Distrcit, Shijiazhuang City, Hebei Province
I-Wheel eluGreen yokuLola ngeCarbide, Idayimani / Cbn Ukucaciswa kwe-Angle yokuGaya iVili lokuThoboza isixhobo, I-Wheel yokuGaya yezixhobo zeCarbide, I-Carbide ejikelezwe ngeSalade blade yokuSika kweSinyithi, I-5inch i-Resin eQhelekileyo yeVili yokuGaya yokuCofe izixhobo zeCarbide, Iidayimani zokugaya zeDayimane yeTungsten Carbide,